Slava Potato Boka reMakambani - Potato System Magazini
Iyo femu yekurima Slava Potato yakaonekwa pamusika weRussia muna 2001, mukumuka kwekusimukira kwezvekurima zvachose, uye indasitiri inokura mbatatisi kunyanya.
Iyo purazi yakavambwa mumusha weKomsomolskoye, Komsomolsky dunhu reChuvash Republic. Basa rakatanga pamahekita makumi matatu nemashanu enzvimbo yakabhadharwa. Basa guru rebhizimusi kurimwa kwetapiri mbatatisi nemiriwo. Munguva pfupi, iyo agrofirm yakawana mhedzisiro inoonekwa: yatove muna 35 yakapihwa zita rekuti "Iyo yakanakisa inogadzira mbatatisi kambani yeChuvash Republic".
Pakazosvika 2009, bhizinesi rakanga rakura kuita boka remakambani, ayo, kuwedzera kuhofisi yepamusoro, yaisanganisira Komsomolskie Vegetables Agrofirm, iyo Slava Potato-Yalchiki Agrofirm uye iyo Slava Potato-Kanash Agrofirm. Minda yebhizinesi yaive mumatunhu matatu eChuvashia kamwechete: Komsomolskiy, Yalchikskiy neKanashskiy. Iyo yese nzvimbo yekurima nzvimbo yakasvika 5300 mahekita.
Zviyo (zvirimwa zvemuchirimo uye zvechando) uye manyowa akasvibira akawedzerwa pane zvakarimwa zvirimwa, asi hukuru hukuru hweboka remakambani kwaive kugadzirwa kwembeu mbatatisi.
Nyanzvi - kugadzirwa kwembeu
Pakutanga, isu taingove mukuita mbeu yekubereka. Zvino ruzivo uye ruzivo rwakawanikwa zvakaita kuti zvikwanisike kutanga nzira yekugadzirwa kwemhando yekutanga mbatatisi, iyo yakazova nhoroondo yeAgrofirm "Slava Potato - Yalchiki".
Muna 2015, varapi vepurazi vakatenga nekudyara mbatatisi microplants uye minitubers mumatanho ekuchengetera. Mhedzisiro yeongororo yakaitwa murabhoritari yakaratidza kuti kuyedza kwakabudirira: izvo zvakawanikwa mbeu mbeu zvakasangana nezvinodiwa zvakanyanya
Makore maviri gare gare, muna Zvita 2017, kambani yakavhura murabhoritari yazvino microclonal yekuparadzira inokwanisa kusvika zviuru zana zvemicroplants pagore uye yakavaka greenhouse yakaoma, iyo inogara ichichengetedza mamiriro akakwana ekuwana mbeu yezvinhu zvemhando yepamusoro.
Nhasi uno boka reSlava Potato remakambani ndomumwe wevatungamiriri mudunhu iri maererano nekurimwa kwembatatisi yembeu. Iyo bhizinesi yakavaka izere yekugadzira kutenderera: Agrofirm "Slava Potato-Yalchiki" iri kushanda zvinobudirira kuwana iyo yekutanga uye yekutanga mbeu zvinhu (microplants, minitubers, 1 munda chizvarwa, super-super-elite), vepamusoro mbeu mbatatisi (superelite, elite ); Agrofirm "Slava Potato" inoenderera mberi nekugadzira kugadzirwa kwembeu yekubereka mbatatisi. Kazhinji, anenge mahekita mazana maviri nemakumi mashanu akagoverwa mbeu dzinokura.
Gore rega rega, angangoita makumi matatu emhando dzakasiyana dzembatatisi dzinoedzwa paminda yekuyedza yebhizinesi. Kubereka zvibodzwa kunoedzwa kushorwa nemavhairasi, goho uye mhando yekutengesa. Mhando dzakanakisa, dzakasimbisa mabhenefiti adzo mumwaka wakateedzana, dzinounzwa mukugadzirwa. Iyo kambani inotarisisa kune ese ari maviri-anoburitsa marudzi ekunze (Riviera, Red Scarlett, nezvimwewo) uye anovimbisa marudzi eRussia (Gulliver, Meteor, uye kubva mumwaka mutsva zvakare Krasa Meshchera, Flame).
Mbeu yemidziyo inowanikwa mumapurazi eSlava Potato Boka reMakambani inotengeswa muRussia yese, pamwe nekunyika dzakavakidzana. Nyanzvi dzeboka remakambani dzinopa masevhisi emhando yepamusoro pamusoro pesarudzo yemhando dzakasiyana uye vanogovana ruzivo rwavo mukukura mbatatisi yembeu nevatengi.
Tafura matapiri uye miriwo Kwemakore gumi neshanu apfuura, Slava Potato Boka rave riri mumwe wevanogadzira makuru mbatatisi nemiriwo mudunhu reMiddle Volga. Zvikamu zvitatu zvebhizimusi zviri kuita kusimudzira kweiyi nharaunda: kambani yemubereki - Agrofirm "Slava Potato" (mbatatisi iri kurimwa), Agrofirm "Slava Potato - Kanash" (mbatatisi dzinorima) uye Agrofirm "Komsomolskie Vegetables" (kurima mbatatisi nemiriwo muvhu rakavhurika). Pakazara, mapurazi anogovera mahekita mazana mashanu ematafura etafura, uye mahekita makumi mashanu emiriwo.
Iwo mapoka akapatsanurwa nzvimbo kubva kune mumwe nemumwe, imwe neimwe yavo ine yakaoma yayo yemuchina wekurima wekupedzisira, zvishandiso zvekumisikidza nekuchengetedza mbatatisi. Kuvapo kwenzvimbo dzemazuva ano dzekuchengetera (ine huwandu hwakawanda hwematani zviuru makumi maviri nezvishanu) dzakashongedzwa nema otomatiki microclimate masisitimu uye firiji michina inobvumira boka remakambani kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro mukati megore rose rekarenda.
Tags: "Kubwinya kumatato"mbeu inomera uye tafura mbatatisiRepublic of Chuvashia
Kukurudzira kwemutero kupinza uye kutengeswa kwembatatisi muUzbekistan kwakawedzerwa kusvika pakupera kwaApril.
SMOLensK REGION KUTARIRA VANOPINDA MU EUROPE YENYAYA YOKUTENGA PAKATI POPOTO KUKOSHESA MUFANANIDZO